7 Istaraatijiyadaha Kuuban ee aad ku biirin kartid aafada si aad ugu beddesho qaddarro badan oo khadka tooska ah | Martech Zone
7 Istaraatijiyadaha Kuuban ee aad ku darsan karto Faafa si aad ugu beddesho beddelaadyo badan khadka tooska ah
Talaado, Febraayo 2, 2021 Talaado, Febraayo 2, 2021 Julia Krzak
Dhibaatooyinka casriga ahi waxay u baahan yihiin xalal casri ah. In kasta oo dareenkani run yahay, mararka qaarkood, xeelado suuq-geyn ah oo wanaagsan ayaa ah hubka ugu wax ku oolka badan arsenal dijitaal kasta. Oo ma jiraan wax ka da 'weyn oo doqon-caddeyn ka badan sicir-dhimista?
Ganacsigu wuxuu la kulmay naxdin dhul-jab ah oo ay keeneen cudurka faafa ee COVID-19. Markii ugu horreysay taariikhda, waxaan u kuur galnay sida dukaamada tafaariiqda ay ula macaamilaan xaalad adag oo xagga suuqa ah. Quful badan ayaa macaamiisha ku qasbay inay ka dukaameystaan ​​khadka tooska ah.
Tirada dukaamada khadka tooska ah ee cusub ee adduunka ku baahsan ayaa ku kordhay 20% labadii toddobaad ee ugu dambeeyay Maarso 2020.
In kasta oo dukaamaysiga dhaqameed iyo khadka tooska ahba ay wax ku dhufteen, adduunka dijitaalka ah wuxuu ku guuleystey inuu cagihiisa dib ugu soo laabto si dhakhso leh. Sababta Bixinta ballaaran ee qiimo dhimista iyo koodhadhka xayaysiinta ayaa sii waday iibinta loogu talagalay dhulalka ecommerce. Dukaamada tafaariiqda ayaa sidoo kale wax badan ka qabtay sidii ay u joogi lahaayeen iyagoo kordhinaya tirada dallacaadaha iyo dalabyada soo jiidashada leh, taas oo horseed u ah xiisaha sii kordhaya ee wax ka iibsiga internetka, xalka ugu ammaan badan inta lagu jiro aafada ba'an.
Maxaa ka dhigaya tigidhada istiraatiijiyad soo kabasho COVID cajiib ah? Marka la soo koobo, qiimo dhimistu waxay u oggolaaneysaa noocyada inay muujiyaan inay daneynayaan inta ay gaarayaan macaamiisha qiimaha la socda ee ka miisaaniyad yar miisaaniyadda caadiga ah.
Qoraalkan, waxaan rabaa inaan kuu soo bandhigo waxoogaa ku saabsan ololayaasha kuubanka ee ugu wax ku oolka badan xilliyada hubin la'aanta suuqa ee ay sababtay COVID-19.
Waa kuwan ololahayga ugu sarreeya ee ku saabsan e-commerce-ka safka kadib:
Kuuboonada shaqaalaha muhiimka ah
Mid soo iibso, mid hel mid bilaash ah or laba qiimaha mid (BOGO) dallacsiinta
Iibso rasiidh soo noqnoqda
Kuuboonada maraakiibta bilaashka ah
Dhiirrigelinta moobiilka ku habboon
Soo Degso Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Xeeladaha Suuq-geynta Kuuboon
Istaraatiijiyada Kuuboonada 1: Bixinta Shaqaalaha Muhiimka ah
Ka mid ah iibka tooska ah ee iibka ah iyo heshiisyada BOGO, COVID-19 ayaa sidoo kale soo bandhigay dalabyo albaabbo leh iyo lambarrada ku-dallaca ee CSR-ka ee shaqaalaha isbitaalka iyo jawaabeyaasha ugu horreeya (tusaale, booliska, dab-demiyeyaasha, iwm)
Adidas sameeyey. Lenovo sidoo kale sameeyey Adiguna waad sameyn kartaa U fidinta qiimo dhimis iyo rasiidh khaas ah shaqaalaha muhiimka ah inta lagu jiro aafada waxay si weyn u xoojineysaa daacad u ahaanta macaamiisha astaantaada waxayna shirkadaada ka dhigeysaa xulasho cad marka aad wax iibsaneyso. Ka sokow dheefaha tooska ah ee laxiriira kor uqaadida daacadnimada macaamiisha iyo CSR, bixinta heshiisyada kuwa kudagaalamaya safka hore ee safka faafa waa waxa saxda ah in la sameeyo.
Markaan ka hadlayo daacadnimada astaanta, kama boodi karo xaqiiqda ah in aafada ay u rogtay dabeecadda macaamilka macaamil badan oo ujeedo leh. Tani waxay ka dhigan tahay in macaamiisha ay u badan tahay inay waligood doortaan dalabka tartame haddii alaabtaada aan la heli karin ama dhinaca qiimaha. Tani waa run labadaba sumadaha B2C iyo B2B. Taasi waa sababta aad u dareemi karto hoos u dhac weyn oo ku yimid u doodista macaamiisha iyo macaamiil yar oo dib ugu soo laabanaya inay wax kaa iibsadaan. Bixinta kuubannada ayaa ah mid ka ammaan badan ololaha daacadnimada inta lagu jiro xilliyada qalalaasaha sida kuwan oo kale.
La imaanshaha dhiirrigelinta iyo nuqul kaararka aasaasiga ah ee kaliya ee shaqaalaha waa mid toos ah, laakiin aqoonsiga isticmaalaha ayaa keeni kara caqabad weyn, taas oo kuxiran ilahaaga tiknoolajiyada. Nasiib wanaag, waxaa jira qalab sida SheerID or ID.me kaa caawin kara hawshan. Waxaad sidoo kale ku saleyn kartaa sicir-dhimista cinwaanka emaylka sida Beryl, Shirkad wadaag wadaag ah, ayaa u sameysay ololahooda COVID-19.
Istaraatiijiyadda Kuuboon 2: Ololaha Ku-Meel Gaarka ah ee BOGO si looga takhaluso keydka duugga ah
Intii lagu jiray xiisadda COVID-19, dukaamo badan ayaa ku dhibtooday inay keydyaashooda ku hayaan. Iibsashada argagaxa, culeysyada xagga saadka ah, iyo dhaqanka macaamiisha oo isbedelaya ayaa kaliya dhibaatada uga sii daray dhanka saadka. Nasiib wanaagse, ololeyaasha kuuboonku waxay si guul leh u yareyn karaan arrinta keydka duugga ah ee la wareegaya bakhaarka. Ololayaasha BOGO (Iibso-Hal-Hal-Bilaash) wali waa mid ka mid ah dhiirrigelinta ugu-caansan ee ugu caansan illaa iyo hadda.
Xayeysiinta BOGO waa hab aad u fiican oo lagu kobciyo dhiirigelintaada iibinta iyo iibinta ama inaad udhaqaajiso alaabooyinka aan si fiican u iibin kaligood. Haddii masiibada ay sababtay bakhaarkaaga inay ka buuxsamaan dharka dabaasha ama qalabka kaamamka, waxaad ku bixin kartaa qaar ka mid ah bilaash amarrada qaarkood. Ololayaasha BOGO waxay si fiican ula shaqeeyaan shuruudaha qiimaha ugu yar ee looga baahan yahay - macaamiisha waxay u badan tahay inay xoogaa bixiyaan xoogaa ka badan hadiyad ahaan. Guul run ah. Waxaad ku keydin doontaa booska bakhaarka, iyo celceliskaaga amarkaaga ayaa kordha halka macaamiisha ay ku faraxsan yihiin wax soo saarkooda bilaashka ah.
Istaraatiijiyadda Kuuboon 3: Kuuboonada ku saleysan kuleylka
Aafada waxay sababtay buuq aad uxun markay timaado daacadnimo sumadeed. Maaddaama macaamiisha ay dib u qiimeynayaan dookhooda noocyada, ganacsiyada waxay u baahan yihiin inay dib u guuleystaan ​​ama ay sii hayaan macaamiisha cusub. Si aad ugu ekaato maskaxda macaamiisha isla markaana aad ugu mashquusho inta lagu jiro muddooyinka dheeriga ah, waxaad soo bandhigi kartaa ololeyaal kuuboon ah oo kor ugu kacaya qiime kasta oo iibsasho ah. Dhiirrigelinta noocan ahi waxay dhiirrigelisaa iibka soo noqnoqda iyada oo la siinayo abaalmarin la taaban karo oo ku soo adeegashada astaamahaaga. Tusaale ahaan, waxaad ku bixin kartaa 10% off amarka koowaad, 20% kan labaad, iyo 30% iibsashada saddexaad.
Waqtiga dheer, waa inaad sidoo kale ka fikirto dhisida barnaamij daacadnimo ah si aad ugu muujiso qadarinta macaamiishaada qiimaha sare leh.
Istaraatiijiyada Coupon 4: (Maaha wax badan) Flash Sales
Iibinta Flash-ku waa hab cajiib ah oo lagu iftiimiyo astaantaada isla markaana loogu riixo macaamiisha inay iibsadaan si dhakhso ah. Si kastaba ha noqotee, waa inaad maanka ku haysaa in COVID-19 ay abuurtay jawi tafaariiqeed u gaar ah halkaasoo dallacsiinta flash-ka aysan had iyo jeer shaqeynaynin sababo la xiriira keydka iyo saadka. Si loo yareeyo jahwareerka macaamiisha silsiladaha sahayda ee jaban, waxaa laga yaabaa inaad ka fiirsato inaad kordhiso taariikhda uu dhacayo iibintaada flash. Waxaad sidoo kale waqti dheeri ah galin kartaa nuqulka iibkaaga si aad ugu shubto deg deg tilmaam ah (adoo adeegsanaya ereyo sida "maanta" ama "hadda) si aad macaamiisha ugu soo jiido inay talaabo qaadaan. Sidan, wax kama beddeli doontid dalabyadaada si ay ugu dhacaan waqti cayiman oo la cayimay, taas oo yareynaysa culeyska joogteynta dallacsiinta kooxahaaga teknolojiyada iyo suuqgeynta.
Istaraatiijiyadda Kuuban 5: Maraakiibta bilaashka ah
Weligaa waligaa wax ma dhigatay gaadhigaaga oo ma aragtay farriinta yar ee ah “Kudar $ X amarkaaga si aad u hesho rar bilaash ah?” Sidee taasi saameyn ugu yeelatay dhaqankaaga? Laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda, waxaan eegay gaadhigayga 'Amazon' waxaanan is idhi, "Ok, maxaan kale oo aan u baahanahay?"
Jawiga googoynta dhuxusha ee tafaariiqda internetka oo ay sii xumaynayso faafida, waxaad u baahan tahay inaad ka fiirsato meel kasta oo jilicsan si aad uga hesho faa'iido suuq ah. Maraakiibta bilaashka ahi waa istiraatiijiyad dhiirrigelin ah oo qumman si aad lug ugu hesho tartankaaga oo aad u dhiirrigeliso beddelaad badan iyo natiijooyinka iibka oo wanaagsan. Haddii aan ku falanqeyno ifafaalaha maraakiibta bilaashka ah xagga aragtida nafsaaniga ah, waxaan aragnaa in noocan ah dhiirrigelintu ay macaamiisha u kala saareyso laba koox - kuwa qarashka yar iyo kuwa sarreeya. Inkasta oo qarash-yareeyayaasha badani ay u arkaan maraakiibta bilaashka ah sida ugu fudud ee la soo dhaweynayo, kuwa kharash gareeya waxay u arki doonaan maraakiibta bilaashka ah inay ku qasban yihiin inay gaadhsiiyaan gaadhigooda ilaa bartilmaameedka. Khiyaanada halkan ayaa ah in macaamiisha dhamaadka ay qarash gareyn karaan wax badan si ay u dareemaan qanacsanaanta helitaanka dirista oo bilaash ah.
Ka sokow rasiidhada maraakiibta bilaashka ah, waxaad ka fikiri kartaa inaad la timaaddo siyaasado soo noqosho leh oo wanaagsan. Rafaayaasha sida Amazon ama Zalando waxay mar horeba ku guuleysanayaan quluubta macaamiisha bixinta deg deg ah oo bilaash ah, waqtiyo soo laabasho dheer, iyo soo celin bilaash ah. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka faa'iideysato hirarka ecommerce ee lama filaanka ah, adeegyadaadu waxay u baahan yihiin inay la mid noqdaan heerka ciyaartoyga khadka tooska ah ee muddada dheer taagan. Waad ka shaqsiyeyn kartaa rasiidhadaada ku saleysan taariikhda soo celinta si aad u siiso heshiisyo gaar ah waxyeelada-xakameynta macaamiisha aan ku qanacsaneyn ama abaalmarin kuwa aan soo celin shay waqti cayiman.
Istaraatiijiyadda Kuuboon 6: Kuuboonada Wada-hawlgalayaasha
Maaha wax lala yaabo in faafida ay si gaar ah ugu adkaatay shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah oo leh joogitaan yar oo khadka tooska ah ah. Haddii aad tahay ganacsi noocaas ah, waxaad la xiriiri kartaa noocyo kale oo bixiya alaabooyin kaaabaya oo aad ka heli karto waxoogaa is-weydaarsi ah oo leh kuubannada adeegyadaada ah. Tusaale ahaan, haddii aad bixiso qalabka timaha, waxaad gaari kartaa noocyada isku qurxinta timaha ama saloonka timaha.
Dhinaca kale, haddii shirkaddaada laga dhaafo cawaaqib xumada dhibaatada caafimaad ee 2020, waxaad la xiriiri kartaa ganacsatada yaryar waxaadna u fidin kartaa iskaashi sidoo kale. Sidan, waxaad ku caawinaysaa ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah iyo inaad horumariso dalab dhiirrigelin leh oo loogu talagalay dhagaystayaashaada. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo noocan ah ku biirista ololaha kuuban, waxaad ku fidineysaa meheraddaada ganacsi adoo la kulmaya suuq gabi ahaanba suuq cusub.
Istaraatiijiyadda Kuuboon 7: Kuuboonada Mobilada-saaxiibtinimada leh
Maaddaama dadka tirada sii kordhaya ay ku adeegtaan taleefannadooda casriga ah, waxay dalbanayaan in qayb kasta oo ka mid ah safarka wax iibsigu uu diyaar u yahay moobil. Sidee xaqiiqadani ugu xiran tahay rasiidhada? Haddii aad horey u baratay sida loo adeegsado emayllada jawaabta leh kuubannada, waa waqtigii tallaabada xigta - kor u qaadista khibradda madax furashada ee furayaasha QR. Adoo siinaya lambarro laba qaab ah (qoraal iyo QR), waxaad hubineysaa in qiimo dhimistaada lagu soo iibsan karo khadka tooska ah iyo qadka. Taasi waa talaabada ugu horeysa ee kuuboonadaada moobiil kuu diyaarsan.
Ka sokow lambarrada QR, waxaad sidoo kale kordhin kartaa kanaalkaaga gudbinta kuuboon si aad ugu darto farriimaha qoraalka iyo ogeysiisyada riixa. Sababta E-maylku maahan kanaalada ugufiican ee isla markaaba soo jiita dareenka macaamiisha isla markaana kiciya isdhexgal deg deg ah. Kanaallada gudbinta moobiilku waxay si fiican isugu xidhan yihiin dalabyada ku-saleysan geolocation-ka waxayna kuu oggolaaneysaa inaad si dhaqso leh uga jawaab celiso waxqabadyada isticmaalaha gaarka ah ama xaaladaha, sida cimilada daran ama dhaqdhaqaaq la’aan.
Waxaa jira xeelado kuuboon oo kala duwan oo kaa caawinaya inaad horay u riixdo istiraatiijiyadda kuuboon. Meel kasta oo aad ku sugan tahay isbeddelkaaga dijitaalka ah, rasiidhku waxay kaa caawin karaan inaad shakhsiyeysato farriintaada, inaad ku tijaabiso wadiiqooyinka cusub ee gudbinta, isla markaana aad ku hagaajiso miisaaniyadda dhiirrigelinta suuqa qasan.
Istaraatijiyadaha Suuqgeyntaada Ku-Meel Gaarka ah Muddada Faafida
Maadaama cudurka faafa ee coronavirus uu dardar galiyay u wareejinta wax kasta oo dijitaal ah, qaabkii hore ee hal-ku-habboonaa ee dhammaan dallacsiinta ayaa noqday mid duugoobay. Marka la eego tartan ganacsi e-commerce COVID-19, magacyadu waxay ku qasban yihiin inay ujeedo dhimis ah si ay u soo jiitaan dukaamada qiimaha leh iyo inay siiyaan qiimo dheeri ah suuqa daadadku dalabyo la mid ah.
Istaraatiijiyad ku-meel-gaar ah oo si fiican looga fikiray ayaa hadda ah mid loo baahan yahay in la helo ganacsiyada badankood ee e-commerce haddii ujeedkoodu had iyo jeer ku sii jiro maskaxda macaamiisha. Iyada oo heerarka furashada kuubani ay cirka isku sii shareerayaan Mareykanka iyo adduunka oo dhan, astaantaadu waa inay ku xirnaataa awoodda weyn ee dhimista. Laakiin qiimo dhimis iyo ololeyaal kuuboon ah waa inaad maamushaa?
Maqaalkani wuxuu tirinayaa istaraatiijiyadaha ololaha ugu sarreeya ee kuugu habboon ee ugu fiican (iyo kan ugu waxtarka badan) sharadka xilliyada hubin la'aanta suuqa weyn - laga bilaabo rasiidhada shaqaalaha lagama maarmaanka ah, dallacsiinta maraakiibta bilaashka ah ee khibradaha ku-xirnaanta moobiilka. Meel kasta oo aad hadda ku jirto safarkaaga isbeddelka dijitaalka ah, rasiidhku waxay kaa caawin karaan inaad shaqsiyeysiiso farriintaada, inaad ku tijaabiso dariiqyada cusub ee gudbinta, iyo inaad ku-wanaajiso miisaaniyadda dhiirrigelinta suuqa qasan.
Tags: boono kuuboontabaha kuuboonrasiidhCOVID-19rasiidh iibsi flash ahrasiidh soo noqnoqdadhaliyaan beddelaad khadka tooska ahkuuboonada wareegakuuboonada-saaxiibtinimomasiiborasiidh lammaanerasiidhyada ganacsiga ka dibxaqiijin
Khabiirka Horumarinta Mawduuca ee khibrad u leh suuqgeynta dhijitaalka ah. Arday dhowaan ka qalin jabiyay Daraasaadka Mareykanka iyo Dhaqanka Ingiriiska. Khibrad u leh ka shaqeynta jawiga SaaS ee tartanka ah. Ku mashquulay wax walbo oo suuq geyn casri ah, falanqeyn, iyo tolida teknoolajiyada cusub ee kumbuyuutareedka hanaanka ganacsiga Qoraaga qoraaga ah ee loo yaqaan 'B2B copywriter' oo loogu talagalay dhagaystayaal kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa horumariya, suuqleyda, iyo maamulayaasha, iyo hanti aad u tiro badan - bogag internet, maqaallo, daraasado kiis, qoraallo fiidiyoow, iyo in ka badan. Waqtigan xaadirka ah u shaqeynaya Voucherify.io, wax ka qabashada dhismaha istiraatiijiyadda content, suuqgeynta fiidiyowga, iyo SEO. Si gaar ah, taageere ciyaaraha fiidiyowga, sheekooyinka suugaanta, iyo daraasaadka veganism.
Lixda marxaladood ee Safarka Iibsadaha B2B
Xaaladda Madow ee E-maylada: Waa Maxay? Macaamiilkee Ayaa Taageera? Waa Maxay Xeerka Loo Baahan Yahay?